Dib ugu noqosho Soomaaliya
Hey’adda u Adeegta Qaxaatiga (VluchtelingenWerk) waxay qabtaa in xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliya aysan weli sugney si halkaa dib loogu noqdo. Waxaan muhiim u aragnaa dib u noqosho keddib in aad aayatiin nabadgelyo iyo horumar joogto ah leh aad hirgelin karto. Waxaan jecelnahay in aan ka wadahadalno sababaha ama dhibaatooyinka kugu kallifaaya in aad dib u noqosho Soomaaliya doorbiddo. Ma waxaad baadigoob ugu jirtaa hey’ad kugu caawini karta dib u noqoshaada Soomaaliya? Markaa waxaan kula xiriiri karnaa hey’ad noocas ah.
Caawinaadaan waxaa barbar socda garab gal dheeraad oo lacageed la helaayo nidaamka-REAN Ku Garab Gelista ka Haajirka iyo ka Noqoshada Nederland(REAN -regeling Return and Emigration Assistance from the Netherlands). REAN waxaad ka heli kartaa la talin, tikidh duullimaad iyo caawinaad sida aad dokumenti safar u heli lahayd. IOM Ururka Caalamiga ee Hijrada (International Organization for Migration) waxaa uu mas’uul ka yahay fulinta brograamka-REAN. Si aad nidaamkaasi u adeegsato waa in dhowr shuruud ah ka soo baxdaa.
Hey’adda u Adeegta Qaxaatiga Nederland (VluchtelingenWerk Nederland) ma hagto dib u noqosho Soomaaliya. Waxaan jecelnahay in aan ka wadahadalno sababaha ama dhibaatooyinka kugu kallifaaya in aad dib u noqosho Soomaaliya doorbiddo. Waxaan kula xiriir karnaa hey’ad kale.
VluchtelingenWerk waxa ay la wada shaqeeyaan hey’ado oo ay siku lammaanan yihiin oo ku siin kara warbixin ku saabsan xaaladda waddanka aad ka timid oo kuna garabgeli kara kuna hagi kara marka aad dib u noqoneyso. VluchtelingenWerk waxa ay xaaladaha dib u noqoshada Soomaaliya u aragtaa mid aysan nabadgelyadiisa sugneyn. Markaa kuma lihin lammaane aan wada shaqeyno Soomaaliya oo ku hagi kara.
Hey’ado ayaa inta badan ku leh lammaane Soomaaliya oo adiga kugu hagi kara dib u noqoshadaada. Si aad u hesho warbixin dheeraad ah la xiriir hey’adahaas ama su’aal taasi hagahaada ee VluchtelingenWerk.
Haddii aad garabgalka IOM xulatay, waxaa ku caawinaaya shaqaalaha Xafiiska-IOM ee Soomaaliya sida aad u bixineyso lacagta-dabiicga ah. Taasi inta ay tahay waxaad u adeegsan kartaa tusaale ahaan kiro, barasho xirfad, tababar, iibka shirkad iwlm.